Evert जन पोर्टरैनमैन र उनको श्रेष्ठता र 'ज्ञान' निबिरू र अन्नाकीका बारेमा: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
Evert जन पोर्टरमैन र उनको श्रेष्ठता र 'ज्ञान' निबिरु र अन्नाकीकी बारे
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	22 अप्रिल 2019 मा	• 10 टिप्पणिहरु
हिजो मैले ईभर जन पोष्टम्यानलाई वेबसाइटमा आफ्नो अद्भुत ईस्टर कथाहरूको प्रशंसा गरे Niburu.co। मलाई लाग््छ कि उनि धेरै राम्रो लग रहेको छ, तर सामग्री को मामला मा मलाई आश्चर्य छ कि यदि प्रमाण को बोझ कुनै पनि अर्थ बनाउँछ। इभर जन ग्रह निभुरु र अन्नाकुकीमा विश्वास र विश्वासको मिश्रणको घोषणा गर्छ। मैले पहिले भनेका थिए कि यी रित्तिलाहरु को विश्वास धेरै रोचक छ र थोडा समय को लागि आफु मा फैलिएको छ। यो कारणले डेभिड इकले यसको बारेमा सम्पूर्ण पुस्तक लेखे जुन केवल आकर्षक र जकरिया सिचिनका पुस्तकहरु को कारण हुन्। मैले पनि यी सिद्धान्तहरूलाई बहिष्कार गर्दैन, तर यदि मैले यो विचारलाई विचार गर्दछु कि हामी एक सिमुलेटिव (वा भर्चुअल) वास्तविकतामा बस्छौं (जस्तै यो लेख श्रृंखलामा वर्णन गरिएको छ, यहाँ en यहाँ) यो सम्भव छ कि यो हाम्रो धारणा को छल को भाग हो।
महत्त्वपूर्ण छ कि घटनाहरू गलत प्रमाणसँग भरिएको छैन। डेभीड आईकेई, सिचिन र पोष्टम्यानको कथाहरूमा, म ठोस मुद्दाहरू पाउन सक्दिनँ, तर केवल व्यक्तिगत साक्षीहरू वा विनाश पनि।
उदाहरणका लागि, मैले पहिले संकेत गरे कि जकरिया सिचिनको कामले मिट्टी ट्याब्लेटहरूको अनुवादमा आधारित हुने देखिन्छ जुन सरल रूपमा वा झूठ बोल्दैन। तथापि, इन्टरनेटको विश्वमा, तथ्याङ्क, ती वेबसाइटहरूमा आउन निकै गाह्रो छ कि यसले समस्याहरू समाधान गर्दछ, तर यसलाई फेरि झूट वा विकृतिद्वारा फेरि गर्नुहोस्। मलाई धेरै अधिक संदिग्ध छ कि वैकल्पिक मिडिया को ठूलो भाग एउटै बिजुली ब्लक द्वारा मुख्यधारा मीडिया को नजिकै हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं सिद्धान्तहरूलाई मुख्यधारा मिडियाको आलोचना लिनुहुन्छ, जस्तै कि पृथ्वीले सपाट वा रिटालिलीजस्ता व्यक्तिहरूको अस्तित्वमा राखेको छ भने, तपाईं चाँडै सबै आलोचनाहरू हटाउन र मुख्यधारा मिडियामा सहि सत्यलाई अनभिज्ञ बनाउनुहुन्छ।
म यहाँ एफ्ट जनसँग वार्तालाप साझा गर्न चाहन्छु, किनकी म उनको अहंकारमा छक्क परेको छु र जसमा उसले आलोचना खारेज गर्छ। ईट जन कल मा मेरो पहिलो ई-मेल कल उनको न्यूजलेटर को एक प्रतिक्रिया थियो जसमा उनले ईस्टर पार्टी को उत्पत्ति मा उनको दर्शन दिन्छन्। मैले उनलाई लेखे कि उनको लेख मलाई धेरै आकर्षक बनाउँछ, तर कि मेरो निबिरू कथाको बारेमा मेरो शङ्का छ। यो मतलब छैन कि उनको लेख मा कुनै सत्य नहीं हुन सक्छ। तथापि, प्रश्न यो छ कि हामी यहाँ माथि उल्लेखित बकवास संग सत्य मिश्रण को रणनीति देख्छौं।
Evert निम्न रूपमा जवाफ दिईयो:
ओह ठीक छ कि मलाई राम्रो लाग्छ। ग्रेट मार्टिन व्रिजल्याण्ड, जुन मेरो लेखन सोच्छ सार्थक छ ... पूर्णतया राम्रो। म तपाईंको लेख धेरै सार्थक खोज्छु, तर म सधैं जहिले पनि न्यायाधीश गर्न सक्दिन कि तपाई के लेख्नु हुन्छ सही छ कि छैन। र पहिले उल्लेख गरिएको रूपमा; "शोमेकरले पढे"। त्यो मेरो लागि र तपाईंको लागि पनि। निबिरे, प्लान्टएक्स, दोस्रोसेन (स्वरज सोनने - SS - नाजीहरु को) पूरी तरिका देखि तपाईंको अनुसन्धान को सबै भन्दा मजबूत क्षेत्र छैन। खैर मेरो भन्दा बढी वर्षको लागि ... तयारीको बीस वर्ष। खोजहरु को संख्या मा दिइयो कि मलाई अनुमति दिइयो, म भन्न को हिम्मत गर्छु कि म मेरो क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ हूँ। अहम! केही हिचकिच जो सत्य हो, तर यसको कारण मान! धेरै संदेह छ कि त्यो दोस्रो तारा अवस्थित छ; इंदिगो रिभोल्युसनबाट मिकी वे लीयुन पनि मेरो साथ फिसलियो र 'अनुनकीकी' र पौराणिक ग्रह / तारा निबिरुको बारे सबै कुराको आलोचना गर्छन्। यस ताराको उपस्थितिको यसको चारवटा ग्रहहरु संग धेरै उपस्थित छन् ... र धेरै संकेतहरू यो आउँदैछ ... र त्यहाँ धेरै "संकेतहरू" छन् भने त्यहाँका संकेतहरू छन् र त्यहाँ पनि ती संकेतहरू छन् कि अरुको बीचमा आल Veluwe मा Fliegerhorst Deelen नीचे एक भूमिगत आधार मा रहन (ग्रीक Delos संग सम्बन्धित - अधिक ग्रीक पौराणिक कथा केवल डच पौराणिक कथा हो किनभने पुरातन युनानी फ्रिसियन थिए)। ओभर जनलाई नमस्कार गर्दै
मैले मात्र एक पटक एक पटक जवाफ दिएँ। मलाई भोलि बिहान प्राप्त भएको जवाफ थप्न दिनुहोस्, जसमा एवर्टनले आफ्नो प्रतिक्रियालाई नीलोमा चिन्ह लगाए।
म ठूलो वा सानो को लागी धेरै सोच्दैन। त्यो हाम्रो प्रोग्रामिंग को सबै भाग हो। म बस आफ्नो विचारहरु को बारे मा चीजहरु को बारे मा लिखें र जाहिरा तरिका देखि धेरै मान्छे को पढने जस्तै कि, तर मलाई लाग््छ कि धेरै अधिक मान्छे हो जो मर्छ या म मरते हो।
कुनै पनि अवस्थामा, मलाई लाग्छ कि तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्न जब कसैले दर्जनौं वर्षको विषय अध्ययन गर्दछ, यो परिभाषाको अर्थ हो कि तिनीहरू सही छन्। त्यो सत्य हो! तर मलाई के खोज्ने अनुमतिको आधारमा!र त्यो धेरै चाँडै जानुभयो र एक कदम द्वारा एक कदम पछाडि ... त्यसपछि ठूलो विचारकहरू निकोला टेस्ला वा नीलस बोहर जस्तै कहिल्यै नयाँ अन्तर्वार्तामा आउन सकेन र सधै शिक्षिकाको काममा सधै अनुभवको साथ चल्न सक्थ्यो। तपाईं सुरंग दृष्टि वा पुरानो सडकमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि बोल्न वा नयाँ पुल निर्माण गर्न र नयाँ मार्ग निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
मलाई लाग्छ यो स्पष्ट छ कि तपाईं वर्षौं अध्ययनको आधारमा सही दर्शनको अनियमित दावी गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अहिले के प्राप्त गर्छौं! म बेनेलक्समा मात्र एक मात्र हुँ र मेरो विषयको बारेमा सबैलाई थाहा छ। मैले यस काम गरिरहेको छु किनकि, म कुनै अन्य शोधकर्तामा आएको छैन जुन मलाई केहि थाहा हुन सक्छ जुन मैले थाहा छैन! म संसारमा एकमात्र हुँ जुन 'एनएनएन एन एन एनआईआई' को दोस्रो भाषा पत्ता लगाउन सक्षम भएको छ; एक विकसित जाति को लागि अत्यन्त उपयुक्त Kwando, एक अत्यधिक शैलीयुक्त आदेश र कमांड भाषा, उदाहरण को लागि, अन्तरिक्ष यात्रा गर्दछ। म पहिलो हुँ भनेर हेर्छु कि माटो ट्याब्लेटमा पाठहरू आर्थकमा लेखिएका छन्। केवल केहि वर्ष पहिले एक डच एसिआईलोजिस्ट थियो कि 'क्युनिफाई लिपि' ले छोटो स्क्रिप्ट हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश मैले यसको बारेमा केहि पनि सुनेको छैन। त्यो टाँस्नु पर्छ किनभने केहि नयाँ लन्च गर्न अनुमति छैन। म सम्भवतः पहिलो र मात्र एकमात्र हुँ भनेर हेर्छु कि डच / फ्रिसीहरू बाबुल, अक्काद र सुमेरबाट आउँछन्। मलाई त्यो सिचिनबाट प्राप्त छैन। म शायद पनि एक मात्र हुँ जो बताउन सक्छ किन मंगल लाल छ र त्यो रातो र कि लाल को धब्बे बृहस्पति को वातावरण मा हो किन। र यसैले म केही तथ्याङ्कहरू थप्न सक्छु जुन अहिलेसम्म कुनै पनि जकरिया सिचिनका पुस्तकहरू देखिएनन्। वैज्ञानिकों, उदाहरणका लागि, दशकहरु को लागि विकासवादी सिद्धान्त को प्रदर्शन र प्रदर्शन को प्रयास गरिरहेको छ, तर यसको मतलब यो छैन कि उन सबै अनुभवी वैज्ञानिकहरु सही पथ मा हो या उन साल को आधार मा सत्य को प्रतिनिधित्व गर्न को दावा गर्न सक्छन्। यो एक विश्वास प्रणाली बनी रहेको छ जो मा वर्णन गरिएको छ।
तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं विकासवादी सिद्धान्त जस्ता विषयमा अनुसन्धानमा एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, तर यसको मतलब यो हो कि कुनै पनि कुनै व्यक्तिलाई फेरि खडा गर्न वा कसले सिद्धांतलाई प्रश्न गर्न सक्दछ? निस्सन्देह तिमी राम्रो कारणहरु संग गर्छौ। तर मात्र होइन ... वा तपाईले गर्नुभयो - हामीलाई एक घण्टा र एक भिडियोको साथ प्रदान गर्नुहोस् र त्यसपछि हामीले सोचेको छ कि राम्रो तरिकाले विरोधाभास सिचिनको कथामा के हो। त्यो कथा अरुसँग सम्बन्धित छ ... र तपाईले यसलाई समर्थन गर्दछ। ठीक छ, तपाईं सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि तथ्याङ्कहरू सूची गर्नुहोस् र तपाइँका पाठकहरूले के देख्नुभएको छ, सोच्नु र सोच्ने भिडियोमा आधारित विचारलाई बताउनुहोस्। हामी पाठकहरूले कथामा देख्न वा पत्ता लगाउन सक्दैनन्। त्यसैले तपाईसँग हामीलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले म 'विशेषज्ञ' को रूपमा विश्वास गर्दैनौं र त्यसैले 'तपाईं shoemaker पढ्ने' मा छैन। म हुँ। तपाईं सबै प्रकारका विषयहरूमा एक प्रतिक्रिया हुन सक्छ, तर तपाईं सही ट्रयाकमा हुनुहुन्छ भने दुई हो। स्यान्डबक्समा एक सानो स्टोटी बबल संग उनको नाक मा निश्चित रूप देखि कुराकानी मा शामिल हुन सक्छ, जब सम्म त्यो गर्न गर्न को लागी! यदि तपाईंले निइसेबुउर हेर्नुभयो भने तपाईले आतंकवाद विशेषज्ञहरू, अमेरिका विशेषज्ञहरू, विशेषज्ञहरू र विशेषज्ञहरू एक, बी वा सी पनि देख्नुहुनेछ। के तपाईं सधैँ सहमत हुनुहुन्छ? पक्कै होइन! वा के तपाईं आलोचना गर्नु हुँदैन? यद्यपि म सही ढंगले मूल्याङ्कन गर्न सक्छु र कुन कुरालाई छलफल गर्न सकिन्छ र मेरो आफ्नै ज्ञान, ज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित हुन सक्छु र मेरो छवि र दर्शनलाई फ्रेम गर्न सक्छु र त्यसपछि मैले एक पटक बढ्दै जान्छु र कोठामा जोरजस्ती भन्छु; 'चोट र हारेको गुच्छा ...' र अर्को च्यानलमा स्विच गर्नुहोस्। विशेष गरी अब मौसमको बारेमा शोरको साथ! तपाईंको स्थितिको आधारमा, त्यस जवाफको जवाफ पछि "होइन, म आलोचना गर्न सक्दैन"। मलाई आश्चर्य छ कि यदि तपाईं यसलाई अभ्यासमा राख्नुभयो। यसैले मेरो पढाईमा रहन सक्दैन, किनकि मेरो पढाई छैन र मलाई लाग्छ कि शुभमेकरले आफ्नो पढाईबाट टाढा लैजान सक्छ र उत्पादन गर्न सक्दछ जसले पछिको नयाँ तातो परिप्रेक्ष्यको साथ कसैले राख्न सक्छ। पनि स्मार्ट र फरक बनाइन्छ। समान समाचार, इतिहास, धर्म र अन्य विषयहरूमा लागू हुन्छ। अनुभवको वर्षहरू विषयको सही दृश्यसँग पर्याय छैन। तपाईं लगभग मसँग सहमत हुनुपर्दछ। पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहोस् ...
मैले वेबसाइटलाई पहिले नै उल्लेख गरेको छु जुन जकरिया सिचिनका किताबहरूको आलोचना गर्दछ र तपाईलाई के सोच्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ। पहिले हेर्नुहोस् ...
तथ्य यो हो कि म तपाईंको बयान को खोज मा दिलचस्प छ जरूरी नहीं कि म मान्छ कि यो सबै सही छ। यद्यपि, म यो रोचक खोज्छु, किनभने तपाईं स्पष्ट रूपमा जान्नका लागि पाठकहरू कसरी रूचि राख्नुहुन्छ र म पनि सत्यको कोर समावेश गर्न सक्ने कुराहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। मलाई मात्र आश्चर्य छ कि यो (चेतना वा होइन) डिस्नोफो संग सत्य को मिश्रण छैन। यो मेरो द्वारा बनाईएको छ ... केही विचारहरू धेरै पक्का वा रोचक आवाज हुन सक्छ। प्रभाव सिर्जना गरेर तपाइँलाई बुझ्न दशकौं अध्ययन चाहिन्छ, प्रभाव हुन सक्छ कि मान्छेले यसलाई प्रमाण को बोझ को बिना जाँच को बिना यो ले। सबै पछि, धेरै मानिसहरूसँग यसको लागि समय छैन ... न त भावना र यसको लागि कारण!
म कंक्रीट को बारे मा उत्सुक हूँ, निबिरु को अस्तित्व को लागि प्रदर्शन योग्य संकेत र, उदाहरण को लागि, Fliegerhorst Deelen मा भूमिगत आधार को। के तपाईं त्यस भूमिगत आधारको ठोस प्रमाण छ वा यो मान्छेको कथाहरूमा आधारित छ? महसुस र जान्न र दर्शन र अन्य बयानहरू। अर्नहेमम / वेल्पले 'एक्सएनएमएक्सएक्स' र 'एक्सएनमक्स' साथै डेलेन एयरपोर्टमा एक हटस्पट थियो। साक्षीहरूले रोशनीहरू, उडान वस्तुहरू (यूएफओ) देखेका थिए र मेरा परिचयको पिताको अनुसार, जो समय समयमा वेल्पमा एक एजेन्सी थियो, फोन प्रायः रिपोर्टको कारण रातो रातो थियो। अर्नहेम र वेप (वेपरब्रोक मा पिरामिड नजिकै) को बीच एक भूमिगत आधार हुन सक्छ। डेलेन विमानस्थलको तल दश-कथा आधार हुनेछ। दुई फर्श अधिक भन्दा ठूलो र ठूलो छ र त्यहाँ दुई विमानहरू 60 मिटरको अनुमानित व्याससँग छन्! आर्मी कमांडर डिक बर्लिन (जर्मन) आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि तुरुन्तै होग वेल्वेव नेशनल पार्क र क्रलर-मुलर संग्रहालय (जर्मन) को निर्देशक बोर्ड को सदस्य बने। एक पूर्व सैनिक त्यहाँ Veluwe मा के गर्छ? के मानिस अचानक एक प्रकृति प्रेमी र कला पारस्परिक बन्यो?! अथवा उसले भूमिगत आधारमा अनौपचारिक भ्रमण गर्न सक्छ (त्यहाँ 'देवता' बाट आफ्ना निर्देशनहरू प्राप्त गर्न सक्छ ?! ... जस्तै एडल्फ हटलर (जर्मन) ले तीन चोटि गरे!)। बर्लिन पीटर वान उम्म (जर्मन) द्वारा सफल भएको थियो। जब उनले सेवानिवृत्त भए, उनले डिक बर्लिनलाई होगे वेल्वेव राष्ट्रिय पार्क र क्रलर-मुलर संग्रहालयका निर्देशकको बोर्डमा सफल पारे। त्यो पत्रुसले स्पष्टतः अचानक प्रकृति र कलालाई मन परायो। मलाई लाग्छ हामी ओरेबेबेकको नजिकै Bilderberg होटल, Fliegerhorst Deelen को नजिकै एक कोठा मा अरेमहेम / वेल्प आधार झाड्न सक्नुहुनेछ, भूमिगत बेस त्यहाँ, सानो 'बिगफुट' वा 'भेडा मान्छे' को Veluwe मा देखा, 'शाही' 'Apeldoorn को नजिकै अपोलो (समर्पित Apeldoorn को नाम को लागि समर्पित प्राचीन मंदिरहरु), सुई, लू महल, हग-सोरेन (सत्ता को एक मजबूत ठाँउ लाग््छ), Ronde Huis,' wodanseiken 'मा Veluwe र दफन mounds, Drie / Wekerom मा प्रक्रियात्मक पथ र अझ बढी सम्भव छ। विदेशीहरू त्यहाँ जंगली छन् ... हाहाहा! अनि जेड्रोमोनमा म्याडोनाको प्रदर्शनको बारेमा के ... उनी Bilderberg होटलमा कोठामा बसे र प्रिन्स चार्ल्स र रानी बीट्रिक्सबाट त्यहाँ गएका थिए। के ती सबै राम्रो रित्तोहरू छन्? हामी थाहा छैन तर Bilderberg होटलहरू (विश्वभर) सधैं सामान्य अतिथिहरूको लागि एक पंख बन्द गरेको देखिन्छ, तर अप्रत्याशित अतिथिहरूको लागि (shapeshifters?! Reptiles?!)। अरेम्याम, गेरेरी, ड्र्यागन एक नाइट द्वारा मारेको थियो ... र नाइट गर्दा ड्रान्सको हृदयमा आफ्नो लांस धकेल्छ, जनावरले शब्दलाई गम्भीर बनायो; 'Gelre, gelre, gelre' ... Gelre मुख्य भाषा मा Kwando जीई EL RE हुन्छ, अर्थ; 'obey-el / ellipse / लोचदार /'' सुन्नु पर्दैन। '' उनले भनिन्- 'मैले भनेँ। 'ड्रेकोस' को साथ Veluwe मा भूमिगत? हामी यति सम्झना छैनौं र सम्भवतः Veluwe मा अन्य अजीब चीजहरूसँग जोड्नुहोस्। उल्टाउनाले हामी ER ईजी <अर्थको साथ देख्छौं; 'धातु / मूल्यवान जीवन-पनि', या त यो केहि बहुमूल्य धातुहरु (सुन) संग 'सुनो' कि यहाँ 'एएन संयुक्त राष्ट्र एनआईआई' (जर्मन) मेरो यहाँ र आफ्नो ग्रह मा पठाउन केहि हुन सक्छ ... वा Veluwe मा 'अग्नि प्रवाह' को बारे मा कि पुरातन समयमा फोरगिनस पिघल साना पुरुष (गोबिलिन? Kobolters?), सानो भूतपूर्व रत्न कि जुन भूमिगत आधार मा बनाइन्छ शायद?
उदाहरणको लागि, डेभीड टेबबोट (जसले इम्मानुएल वेल्विकोस्कीको काम जारी राख्छ) नेबिराउको अस्तित्वमा विश्वास गर्दैन। तपाईले Velikovsky को कामलाई उल्लेख गर्दछौं। तपाईं त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? इम्यानुएल वेल्विकोस्कीलाई दोस्रो ताराको अस्तित्वबाट थाहा थिएन। त्यसकारण तपाईंले उनीहरूको पुस्तकहरूमा कुनै चीज पाउनुहुनेछैन। यसको अस्तित्वको लागि संकेत! उदाहरणका लागि, 'धरतीको पानी' किलोमिटर चकित हुन्छ, जस्तै तारा पार हुन्छ, जस्तै कि प्रस्थानको समयमा ... र जसको परिणाममा रेड सागर अस्थायी रूपमा सूखे। तीन दिनको लागि (ती तीन दिन उहाँ येशूको चिहानमा हुनुहुन्छ। तीन दिनपछि येशू उठाउनुहुन्छ)। येशू दोस्रो पटकको लागि धेरै नामहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। Velikovsky एक कम्युट को माध्यम ले यो अनुमति दिन्छ ... र मलाई लाग््छ कि Velikovsky को कमेन्ट सिर्फ दोश्रो तारा हो। या ग्रह Nibiroe देखि Sitchin। त्यो ज्ञान मात्र थाहा थिएन उनको समयमा। छोटो समयमा, जब सिचिनले आफ्नो पुस्तक 1976 मा प्रकाशित गरे।
पोष्टम्यानले उनको प्रतिक्रियामा बुझाउँछन् यो लेख मेरो द्वारा, जसमा मैले एक तीन-घण्टा फिलिम पोस्ट गरे जुन जकरिया सिचिनको प्रमाणको बोझलाई अमान्य पार्छ। Evert Jan यो सोच्दैन कि पर्याप्त छ। उनले सोच्न सक्छ कि मलाई माटो ट्याब्लेटको निर्णय गर्न चाहन्छु, तर प्रश्न यो छ कि उसले भिडियो हेर्नको लागि समस्या ल्याएको छ। त्यस भिडियोमा यो चरणले समझाईएको कदम कसरी प्रमाण को बोझ अगाडी सिचिन द्वारा राख्दछ र अन्य तथ्यहरु वा गलत छैन। म बुझ्न चाहन्छु कि एवर्ट जेनले मलाई यो चरणबाट सबै चरणको टाइप गर्न चाहन्छ, तर मैले ईफ्ट जेनको रूपमा यस्तै अहंकार छैन र मलाई विश्वास गर्दछ कि तपाइँ एक पाठकको रूपमा यो भिडियो धेरै राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, बिना टाइप गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ यो यसलाई फेंक गर्न गैर-तर्क हो। यसबाहेक, युवराजले आफैं अनुच्छेद5को तलबाट यसो भन्छन कि उनी मेरो साथ पूर्णरुपमा सहमत छन्, तर त्यो त्यहाँ मलाई सहमत छैन, तर म वास्तवमा त्यही कुरा भन्छु।
नाम Poorterman मा के हो? गेटकेपर? और्वर जनले साक्षीको बयान र gnomes बारेमा कथाहरूको साथमा उनको प्रतिक्रियामा फर्काउँछ, तर यदि तपाइँ साँच्चिकै तलका वृत्तचित्रमा एक नजर राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले फेला पार्नु भएको छ कि हामी सधैँ अनर्थसिंह कथाहरू स्वीकार गर्दैनौं। उल्ट जन कुरा स्पष्ट छ कि उनीहरूको पाठकहरूका अधिकांश 'चीजहरू' खोज्नको लागि 'न त भावना र नराम्रो' छ, तर उहाँले अझै पनि हरेक हप्ता निबिरु बारे एक टुक्रा प्रकाशित गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो देखिन्छ कि उनी मानिन्छ कि तपाईले उहाँलाई स्वीकार्नु भएको छ र यो आत्मविश्वास वा यसको जाँचको कारण छैन। म व्यक्तिगत रूपमा यो शर्म फेला पार्छु कि तपाईं आफ्ना पाठकहरूलाई यस्तो अहंकारसँग भेट्नुहुन्छ।
एक राम्रो समझको लागि र किनकि म मान्दछु कि तपाईंसँग भावना र सामग्रीको प्रशंसा गर्ने कारण हो, म फेरि फेरि भिडियो दिनेछु जसमा यो व्याख्या गरिएको छ कि कति धेरै लेखकहरूले अक्सर शुद्ध बकवास घोषणा गर्छन्। म कल्पना गर्न सक्दिनँ, यद्यपि, तपाइँसँग तीन घण्टासम्म हेर्नको लागि समय छैन, तर सप्ताहांतमा हलिवुड चलचित्र सेटअप गर्नुको सट्टा, तपाईं केहि गहिरो गहिराईको लागि समय बनाउन चाहानुहुन्छ। शायद एवर्ट जनले मेरो सामग्रीमा 'आलस्यता' लाई समाप्त गर्नुको सट्टा एक पटक यो सामाग्रीलाई पनि प्रतिक्रिया दिन सक्दछ (किनभने मैले चरणको चरणबाट सबै कुरा टाइप गर्दैन)। यसको विपरीत, यो सहायक वृत्तचित्र हेर्न उपयोगी छ, यस वृत्तचित्र सम्भवतया उत्तम फारम बनाउन। यद्यपि यो यहाँ पनि लागू हुन्छ कि हामी अरूको जानकारीसँग सम्झौता गर्नु पर्छ, किनभने तपाईं र म कहिलेकाहीँ अपरिवर्तित गर्ने समय पाउँदैन, उदाहरणका लागि, सिमेरियन मिट्टी ट्याबलेटहरू, तर कम्तीमा पनि यो अर्को पक्षको अध्ययन गर्न उपयोगी छ। उदाहरणका लागि एफ्ट जन, के लाग्छ कि उनीहरूले पत्ता लगाइएका मिट्टी ट्याब्लेटहरूको 'स्टिनो' (प्रतिक्रिया देखाउँछन्) निबिरू र अन्नाकीका बारे बढी भन्नुहुन्छ? यो सबूतद्वारा प्रमाणित हुन सक्छ र सरल 'न त दिमाग वा मनन' को लागि सत्य जाँच गर्न लाग्यो?
के 12e ग्रह को अस्तित्व हटाइएको छ? अन्युनकी को अस्तित्व हटाइएको छ? होइन, अवश्य होइन। यो पनि हुन सक्छ कि Sitchin जस्तै मान्छे गेटकेपर्स हो जसले सचेत बकवास संग सत्य मिश्रण गर्न पर्छ। यो पनि हुन सक्छ कि तिनीहरू सजिलै यसको आश्वस्त छन्। कुनै पनि अवस्थामा, कथाहरू एकदम ठूलो आकर्षण जारी छ। म पनि तिनीहरूलाई धेरै रोचक खोज्न चाहन्छु, तर कहिलेकाँही तपाईंलाई केवल एक जाँच गर्न को लागी कि यदि उनि केवल रोचक कथाहरू छैनन् भनेर हेर्नको लागि। व्यक्तिगत रूपमा, म इतिहासबाट अधिक जान्छु यो परिप्रेक्ष्य हेर्नका लागि (त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्)। म पनि तपाईंलाई आफैलाई यो खोजी गर्न सल्लाह दिन्छु र कुनै पनि कुरालाई बेवास्ता गर्न स्वीकार गर्दैन। त्यसो भए मैले लेखेको सबै कुरामा लागू हुन्छ।
जकरिया सिचिन र एरिच वान डान्निकनको सत्य के हो भने अन्नाकी जस्तै अस्तित्वहीनताको अस्तित्व?
UFOs जुन एक तूफान क्लाउड वा बस एडोब पछि प्रभाव को भित्र र बाहिर गोली?
बाह्य ठाउँ र यूएफओको अस्तित्व
ट्याग: एलियन्स, Evert Jan, विशेष, Nibiroe, निबिरू, निबुरु, ईस्टर कथा, ईस्टर, Poorman, Sitchin, उफौ, UFOs, व्याख्या, Velikovsky, Zecharia
22 अप्रिल 2019 मा 12: 24
जुन मलाई अझै सबैभन्दा माथि राख्छ।
साथै तपाइँलाई हामीले सिक्नको लागि मार्टिनलाई धन्यवाद दिन्छौं।
यस भिडीयो सहित मैले मलाई एकदम फरक दृष्टिकोण दिए कि हामी त्यो टाढा छैनौं
यदि आज दावी गरिएको छ भने।
तपाईंलाई भिडियो संग धैर्य हुनुपर्दछ
त्यसपछि तपाईं2बिन्दुमा आउनुभयो भने यी (पहाडहरू) बस्थे।
किन सबै छविहरू पुरातन मिस्रमा भत्किएको छैन? पिरामिडलाई कसलाई थाहा छ?
यो कसरी भोज भएको छ, कसरी ड्रिल गरिएको छ यसको मतलब हामी अहिले भन्दा उच्च सभ्यता संग काम गरिरहेका छौं?
वा यो मतलब छ कि तिनीहरू अहिलेसम्म नै थिए, तर त्यो स्वभावले पहेलीलाई गाह्रो बनाएको छ किनकी यो पतित छ?
कसलाई थाह छ तर यसको बारे सोच्ने सामग्री तपाईं सधैं गलत हुन सक्नुहुनेछ।
22 अप्रिल 2019 मा 13: 01
नमस्ते मार्टिन, मैले पहिले नै टिप्पणी गरेको छु कि Poorterman ले यो टिप्पणी देख्नुहुन्छ
अहिलेसम्म धेरै वर्षको लागि एक आँखा राख्नुहोस्। साइकल चमडा तेस्रो रीचको आयन छाला तिर बढ्छ। म उसलाई एक मीटरको लागि विश्वास गर्दिन ...
22 अप्रिल 2019 मा 21: 01
अब हामी बिन्दु पुग्यौं जहाँ हामी जान्दछौं कि यो संसार एक दोहोरी / भ्रम हो। प्रकाशको गति तपाईले समय र सामग्री पाउनु भयो। कसले यो संसार सिर्जना गर्यो र उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र जीवन बिताउनुहुन्छ कि साँच्चै फरक छ? खैर यदि हामी अतीतमा रोट गरेर उनीहरूलाई हाम्रो ऊर्जा दिन्छौं। यद्यपि हामी हाम्रो लागि सही लडाइँ गर्छौं भने यो ईश्वर उहाँको बाटो हुन्छ। चाहे उनको (लिंग-तटस्थ) नाम अल्लाह, अनुनकीकी, ईलोहिम, ईश्वर, ज्यूस, इस्इस, मारिया र यति हो कि वास्तवमा अप्रासंगिक छ। जब हामी हाम्रा शरीर मूलको सम्मानमा मन्दिरमा परिणत गर्छौं, हाम्रो संसार भ्रमको अवस्थित छ। तपाईंले यो देख्नुहुन्छ, हामी मात्र छनौट गर्न र पुरानो दुनियालाई अलविदा भन्न चाहन्छु।
सबैलाई माथिबाट आउनका लागि तपाईंका शरीर कक्षहरू (डीएनए) समायोजनको साथ गर्न पर्छ। यो ऊर्जा हो, हामी फायरवेलमा वा हाम्रो मूलमा लग इन गर्छौं?
22 अप्रिल 2019 मा 21: 32
मार्टिन म यसलाई छोटो राख्न जाँदैछु। केवल आफ्नो काम गरौं र सबै बाकी व्याकुल छ।
23 अप्रिल 2019 मा 10: 58
विकासको सिद्धान्त झूटो छ! gravestones (पुरातत्वविद्हरू) द्वारा पाइएको "मध्यवर्ती फारम" को कुनै प्रमाण कहिल्यै भएको छैन।
यदि तपाईं यसलाई बुझाउन सक्नुहुन्न भने, "बिग बूम" भन्नुहोस्।
25 अप्रिल 2019 मा 08: 10
यो निश्चित रूप देखि भ्रमित छ कि सबै उन ठूलो पिरामिड र जस्तै साना सीमित मान्छे द्वारा बनाईएको थियो। मलाई विश्वास छ कि उनीहरूले हामीलाई विश्वास गरे भन्दा पुरानो पृथ्वी हो। म पनि विश्वास गर्दछु कि निबुरुले पृथ्वी रिसेट गर्न 3600 वर्षमा एकै पटक गुजराउँछ। मलाई विश्वास छैन कि यस ग्रहमा देवताहरू छन्, यो केवल एक ग्रह हो कि ऊर्जा को भरा एक पोले पारी को कारण बनता छ।
ती कथाहरू आक्रोश पूर्व ज्ञानको साथ समूह द्वारा आविष्कार गरियो एक पटक फेरि नयाँ युगको शासक बन्छ। सम्पूर्ण उफान कथा र माथिबाट आउनेहरू पूर्णतया सन्दर्भ बाट बाहिर छन्।
सबै कुरा हाम्रो विचारबाट सिर्जना गरिएको छ!
मानिसहरू ठूलो हुनुको कारणले ओजोन लेयर7मोटो थियो, परीक्षण संग यो गरियो र वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भयो। मेरो अन्तर्वार्ता यो एक तार्किक व्याख्या पाउँछ, म वैज्ञानिक प्रमाण भन्दा बढी मान संलग्न गर्दछु। यसको अतिरिक्त, यो बताउँछ कि डायनास विलुप्त हुन्छन् र पृथ्वीमा सबै चीज धेरै ठूलो थियो। ओजोन लेयर फेरि पुनःप्राप्त गर्दैछ र यसैले मौका धेरै अधिक छ कि सबै केहि फेरि ठूलो हुनेछ र डच न केवल।
यसैले यो राम्रो छ कि तपाईंले संकेत गर्नु भएको छ कि हामी जानकारी सङ्कलन गर्न र घोडामा परित्याग गर्न लचीला हुनुपर्दछ।
मैले एक तरिका विकसित गरेको छु र मैले धेरै ठाँउको जानकारी हटाएको छु र मैले सबैभन्दा बढी फिल्टर गरेको छु र मेरो मनमा उपयोगी भागहरू छन्।
म कसरी जान्दछु सत्य के हो र होइन: अन्तर्वार्ता!
धेरै मानिसहरूले यसो भने, तर तपाईको आफ्नै अन्तर्वार्तामा फोकस र त्यसपछि तपाइँ अन्ततः पहेली राख्न सक्नुहुन्छ।
अरूलाई पहेली राख्न नदिनुहोस्!
29 अप्रिल 2019 मा 06: 03
उल्ट-ज्यान भिडियो हेर्न हेर्न इन्कार गर्दछ जसमा सिचिनको धारणा पूर्ण रूपमा कमजोर छ
मलाई यो हाहा बाहिर टाइप गर्नु पर्छ।
बस Evert मा एक नजर छ, किनभने यो भिडियो प्रमाण संग समर्थित छ र यो बाहिर टाइप गर्न गाह्रो छ।
29 अप्रिल 2019 मा 07: 19
उनले शायद Orjana सीबीडी तेल र कोलोइडल चाँदी लिन इन्कार गरे, उनले हरेक स्तम्भ सुरु गर्दछ कि उनी बिरामी हुन्छन्। आखिर, म यी दुई साधनहरूमा दृढतापूर्वक विश्वास गर्दछु र कोललोइड चाँदी आफैलाई बनाउँछु।
म पनि भन्न चाहन्छु कि मलाई लाग्छ कि निबुरु साइटमा उफो पदोन्नति बाहेक राम्रो इराक छ। तिनीहरू यो अविश्वसनीय अनुभव गर्छन् र अरू उपयोगी कथाहरूलाई कमजोर पार्छन्।
उल्ट-जेन भन्छिन् कि ओबिलिस्ले एउटा चट्टानलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ, कि उसले एक शिशुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ, त्यो सही छ। यो एक एंटीना हो जसले दोहोरो देवता / इकाईहरू / एल्व्सको लागि ऊर्जा वा संक्रमणलाई पठाउनुपर्छ।
फ्लाइंग सागरहरू निस्सन्देही यस पृथ्वीमा आउनेछन्, तर तिनीहरू यस पृथ्वीमा सुरू भएनन् र अन्य ग्रहहरूबाट होइनन्। म विश्वास गर्दछु मात्र एक तरिका हो र यो जन्म च्यानल वा मृत्यु मार्फत हो। यही कहानीको लागि जान्छ कि अन्नाकीकी आफ्नो ग्रह को वातावरण को पुनर्स्थापना गर्न हाम्रो सोने को आवश्यकता हुन्छ। यो कथा प्रतीकात्मक छ कि सुनले मानिसलाई यसमा राख्ने ऊर्जालाई प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ। हामी मधुमेह हो कि पैसा / सुन / शहद को लागि काम र ओबिलिस्क / लिंग को नयाँ बच्चाहरु लाई बनािन्छ (सैमसंग / उपग्रह गैलेक्सी भन्नुहोस, एक्स र वाई को गैला प्रतिनिधित्व)।
यदि एक विशाल क्षेत्रीय भूमि भने, तिनीहरू केवल राम्रो तरिकाले बोर्ड गरेर, म पाइप छोड्न सम्म पर्खछु।
तपाईलाई वास्तवमा सबै भन्दा राम्रा भाषाहरु सिक्न को लागी सबै कुरा बुझ्न को लागी, तपाईं केवल ध्यान दिनु पर्छ।
ऊर्जालाई सबै कुरा अनुवाद गर्नुहोस्, त्यसैले म रातो बुल लिनेछु।
29 अप्रिल 2019 मा 08: 54
यो बकवास संग सत्य को भागहरु मिश्रण गर्न नियन्त्रित विरोध को इरादा हो। यदि कसैले3घण्टा डोकू हेर्नको लागी समस्या लिन्छ, त्यतिबेला त्यो बकवास बारेमा स्पष्ट हुन्छ।
त्यसोभए Evert जनमा आउनुहोस् ... तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ!
15 मई 2019 मा 11: 05
उल्ट-ज्यान एक विशेष सरोकारवाला हो जसले आफ्नै सत्य पालन गर्छ, यसको वरिपरि वास्तविकताको लागि आँखा र कान छ। ओह प्रिय के मैले अब भन्िरहेको छु ...। उनको वास्तविकता वास्तविकता हो। र मैले स्वर्गको प्रयोग गरें ...? ओह, ईजेले पनि यसको बारेमा एक स्पष्ट राय छ।
वर्ष पहिले मैले ईजे अप बन्द गरें, तर त्यस पछि देखि मैले कहिल्यै पनि भेटेको छु जसले उनीहरु भन्दा बढी मुट्य सिद्धान्त छ। प्रत्येक समय जब तपाइँ एक कंक्रीट सुदृढीकरण वा प्रमाणको बोझ सोध्नु हुन्छ उनको निष्कर्षका लागि, उहाँले आफ्नो 30 वर्षको अनुभव र अनुसन्धानलाई बुझाउँछ। ओह हाँ ... 10 वर्ष पहिले, यो 30 सालको अनुसन्धान थियो। त्यसोभए यो पूर्ण-लम्बाइको रेकर्ड धेरै मोटो खरिदमा फंसिएको छ। म व्यक्तिगत रूपमा त्यो रेकर्ड एक निश्चित क्षणमा फ्याँकिरहन्छु र फरक ध्वनि खोज्दैछु, र प्रायः कम सुन्दर छैन।
र जसले मलाई ईजे र उनको सिद्धान्तको साथ उत्तेजित गरेको छ ... किन त्यो मात्र हो जसले यो (उहाँका आफ्नै शब्दहरू) को बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ, र किन उहाँसँग यो उच्च व्यक्तिको सन्देश के हो भन्ने व्याख्या गर्न ज्ञान र बुद्धि छ? शक्ति हो, र यो ग्रहको बाकी धेरै बेवकूफ र यस ज्ञान प्राप्त गर्न सबै भन्दा धेरै भन्दा माथि छ।
म जवाफ दिन्छु कि EJ ले सधैं धेरै भन्दा माथि प्रदर्शन गर्दछ। यो मार्टिन आफैंले बिन्दुको रूपमा भोगेको छ, तर मलाई लाग्छ कि ईजेडका लागि चुनौती भनेको पहिलो पटक पढ्नको लागि सिक्नु र व्याख्या गर्ने आत्मिक महिमा गर्नु भन्दा पहिले के पढ्नु पर्छ भनेर व्याख्या गर्नु पर्छ!
अन्तमा, मेरो व्यक्तिगत राय यो हो कि ईजे कैम्प फायर को समयमा एक राम्रो कहानी बताउन सक्छ र आफैलाई सीमित गर्न पर्छ। प्रस्तुतीकरण आफैं एक वैज्ञानिक आइकन को रूपमा जो सबै भन्दा माथि सुन्न र अरूको विचारहरू हेर्न चाहँदैनन् ... तपाई कस्तो प्रकारको शोधकर्ता हुनुहुन्छ?
« जब सरकारहरूले आक्रमणको घटनामा सोशल मिडिया वा इन्टरनेट सुरू गरे (जस्तै कि श्रीलंकामा), तपाई वास्तवमा पहिले नै थाहा छ
नोटरे-डेम आगो:5वर्ष पुरानो ओक (सुखा) बीममा मिनेटको लागि 300 एउटा परीक्षण »
कुल भ्रमण: 12.283.583
SandinG op के 911 आन्तरिक काम थियो? De Telegraaf सँग तपाइँका सबै प्रश्नहरूको जवाफहरू छन्!
सीजर शेर कैफे op अमेरिकाले उनीहरूले हाल्ने सबै बमहरूमा जलवायु कर कहिले तिर्ने?
मार्टिन भिजल्याण्ड op तत्काल कल! हामीले मिडियालाई अब कार्यबाट टाढा राख्नु पर्छ!
क्यामेरा2op तत्काल कल! हामीले मिडियालाई अब कार्यबाट टाढा राख्नु पर्छ!
1.634 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्